ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှ ကြိုဆိုပါသည်။
အခြားနိုင်ငံ (သို့ မဟုတ်) ဒေသတခုအားရွေးရန်
> လူကြီးမင်း ၏ ရွေးချယ်မှုအား အတည်ပြုရန်
လူကြီးမင်း ၏ ရွေးချယ်မှုအား အတည်ပြုရန်
Schneider Electric (မြန်မာ)
လူကြီးမင်းတို့ ၏ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုများ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံ အကျိုးရှိထိရောက် စေရန်အတွက် အချိတ်အဆက်မိ စွမ်းအင်စီမံခန့် ခွဲ အသုံးချနည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ နှင့်ပြည်တွင်းအသိအမှတ်ပြု မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများ ထံမှရရှိနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများ နှင့် အထောက်အပံ့များ ပိုမိုလေ့လာရန်
လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေအိမ်များ အတွက်
နေအိမ်တွင် တပ်ဆင်ရန် ပစ္စည်းများ စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်များ ရရှိရန်
Contact our experts at +95(1) 9661120 အီးမေးလ် ပို့ ရန်
၁၉(B)၊ ၁၉ ရိပ်သာလမ်း
၇ မိုင်၊ မရမ်းကုန်း မြို့ နယ်
ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ
Tel. +95(1) 652 414
ဖြန့် ချီရေး ကိုယ်စား လှယ်များ
၂၈၊ အရှေ့ မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း
Tel. +95(1) 860 4425 ~ 29
၃၉၉၊ ၈၁လမ်း ၃၁/၃၂ကြား
ချမ်းအေးသာဇံ မြို့ နယ်
Tel. +95(2) 69 197
Kyaw Thein Khaing (KTK) Company Limited
၃၀၊ ပါရမီလမ်း၊ ချော်တွင်းကုန်း
Tel. Tel: +95(1) 667 245
၉၀၁/၄၆၊ ၇၈လမ်း သိပံ္ပလမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား
Tel. +95(9) 910 370 30
Silver Tiger Company Limited - ရန်ကုန် ရုံး
Tel. +95(1) 559 433
Silver Tiger Company Limited - မန္တလေးရုံး
၂၆၇၊ ၂၆ လမ်း ၈၃နှင့်၈၄ ကြား
Tel. +95(2) 349 57
Super Triumph Co., Ltd
G-15, Block A, ပုလဲကွန်ဒို, ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း
Tel:+95(1) 555528, 5555342
၃၀၇၊ ၉ လမ်း၊ ရန်ကုန် စက်မှုဇုံ
Tel. +95(9) 250 092 135
SUPER MEGA Engineering Group Co., Ltd
မြောက်ဥက္ကလာ စက်မှုဇုန်
Tel. +95(1) 691 842 ~ 5
Tel. +95 562 3177
System Integrator - Automation
Inginn Nwe Trading Co., Ltd
Blk 2, Room 11, ၉၉လမ်း
န၀ဒေး ဥယျာဉ် အိမ်ရာ
လှိုင်သာယာ မြို့ နယ်
Tel. +95(9) 511 5672
AtoZ Automation Co., Ltd
ကမာရွတ် မြို့ နယ်
Tel. +95(9) 507 0697
Great Alliance Engineering Supply Co, Ltd.
၅၊ အောင်ချမ်းသာ (၂) လမ်း
Tel. +95 (9) 730 355 00
Golden PowerMate Co. Ltd.
၂၄၀၊ ဒုတိယထပ် (ဘယ်)
၃၉ လမ်း (အထက်)
ကျောက်တံတား မြို့ နယ်
Tel. +95(1) 122 4109
System Integrator – Building Management Systems
Naung Yoe Technologies Co., Ltd
၁၆၊ အောင်မင်းခေါင် (၂) လမ်း
Tel. +95(9) 730 177 77
Computer Technical Team (Trading) Co., Ltd
၁၁/၁၃, ၄၅ လမ်း
ဗိုလ်တထောင် မြို့ နယ်
ရန် ကုန်မြို့ 
Tel. +95(1) 200 720
Convergent Myanmar Co., Ltd
၁၀၊ အခန်း (001-002), ၄၆ လမ်း (အောက်)
ရန်ကုန် မြို့ 
Tel. +95(1) 296 301
M Tech Distribution Co., Ltd
B-37 ~ B-40၊ မြေညီထပ်
Myanmar Culture Valley Shopping Center
ဦးဝိစာရ လမ်း၊ ဒဂုံမြို့ နယ်
Tel. +95(9) 974 815 672
APC Elite Partners : System Integration
No 158A, Innsein Road , Hlaing Township
Distributors: Process Automation
၅၉၊ ရွှေဟသ င်္င်္ာလမ်း, ခြောက်မိုင် ခွဲ
ပြည်လမ်း, လှိုင်မြို့ နယ်
Tel. +95(1) 526 130
PEMCO Company Limited
၁၄၀၅၊ ယုဇန တာဝါ
ရွှေဂုံတိုင် လမ်းဆုံ, ဗဟန်းမြို့ နယ်
Tel. +95(1) 559 678
Zorya Services Limited (Subsidiary of Chuan Huat International S Pte Ltd)
၁၂၇၊ အခန်း A-3
အနောက် ရွှေဂုံတိုင် လမ်း
ဗဟန်း မြို့ နယ်
ရန် ကုန် မြို့ 
Tel. +95(9) 250 282 178
အချို့ သော ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရရှိနိုင်သေးပါ။ ကုန်ပစ္စည်း စာရင်းအား လေ့လာရန်
Schneider Electric Global Discover our offer Green Premium (RoHS, REACh, PEP, Eoli) Electrical Utilities Oil & Gas Transportation Marine Food & Beverage Mining, Minerals & Metals Water & Wastewater Data Center & Networks Colocation Data Centers Buildings Healthcare Smart Buildings & Homes Smart Energy and Utilities Smart Water Smart Public Services
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ website အား ယခုပင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုက်ပါ ပိုမိုလေ့လာရန်
တွဲဘက်အမှတ်တံဆိပ် SQUARE D
ငါဖွဈ၏ …ဗိသုကာ, ဒီဇိုငျနာသို့မဟုတျအငျဂငျြနီယာခြုပျစီးပှားရေးလုပျငနျး Resellerစားသုံးသူ / ကိုယျရေးကိုယျတာအသုံးပွုမှုကနျထရိုကျတာလြှပျစဈအစိုးရအဂေငျြစီကွောငြးသားအကွီးစားကျောပိုရေးရှငျးအသုံးပွုသူမူရငျးပစ်စညျးထုတျလုပျသူpanel ကို BuilderလကျလီဝနျဆောငျမှုပေးသူအလတျစားစီးပှားရေးလုပျငနျးကိုအသုံးပွုသူမှအသေးစားSystem Integratorလကျကားဖွနျ့ဖွူး
Green Premium Eco အမှတ်တံဆိပ်